Kedu otu onye na - arụ ọrụ ụgbọelu zuru oke na onye na - ebu ego?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Kedu otu onye na - arụ ọrụ ụgbọelu zuru oke na onye na - ebu ego?
Airlines • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Mgbasa Ozi Ireland • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
oyiyi ey ej codeshare
A maara EasyJet dị ka ụgbọelu na-emeghị emefu ego na ikuku ikuku dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ma ọ bụ enweghị ọrụ. A maara Etihad dị ka ụgbọelu ọrụ zuru oke na ọrụ magburu onwe ya.
Kedu ihe jikọrọ ndị na-ebu ụgbọ abụọ ahụ? Etihad na easyJet na-eche mmefu ego na okomoko bụ agwakọta. Ikekwe nke a bụ usoro ọhụụ na nke ọhụụ.
Etihad Airways (Etihad), ụgbọ elu mba nke UAE, abụrụla ụgbọ elu kachasị nso na-esonyere EasyJet, otu n'ime ụgbọ elu kachasị elu n'ụwa. Mmekọrịta ọhụrụ a pụtara na ndị ahịa nwere ike ịzụta tiketi site na webụsaịtị EasyJet zuru ụwa ọnụ na-ejikọ netwọkụ ụgbọ elu abụọ ahụ ma mepee ohere ọhụụ na-akpali akpali maka njem n'etiti Europe, Africa, Azores na UAE. Mmekọrịta ahụ na-abanye ozugbo.
Mmekọrịta a na-esote mmemme mmemme ngwa ngwa ngwa ngwa na-aga nke ọma na njikwa njikwa ụgbọ elu na-eduga ụwa, Dohop, nke na-eme ka weebụsaịtị EasyJet zuru ụwa ọnụ jikọtara netwọkụ Europe yana ogologo ụgbọ elu. Maka Etihad, emezuola nke a site na iji NDC (Ike Nkesa Ọhụrụ) na-enye ikike ị nweta ọrụ mmekọrịta maka mmekọrịta ọhụụ na-agaghị ekwe omume. Mmekọrịta na EasyJet na Dohop bụ ihe mbụ ụgbọ elu mba UAE na-eji teknụzụ a na Etihad na-ezube itinyekwu ụgbọ elu na ndị mmekọ njem gaa na pọtụfoliyo NDC ha na 2020.
Ali Saleh, Etihad Airways Vice President Alliances and Partnerships kwuru, sị: “Mmekọrịta ọhụrụ a n’etiti nnukwu akara abụọ bụ ngagharị ezi uche dị na ya maka ụlọ ọrụ anyị abụọ. EasyJet bụ ezigbo onye nrụpụta maka anyị na Europe, na-enye anyị ohere ịdabere na obosara nke kọntinent anyị ruo Abu Dhabi, ebe anyị na-emezi ụzọ nke ijikọ ndị ọzọ ụgbọ elu na ndị mmekọ njem gburugburu ụwa.
"Ikike inye ikike ntinye akwụkwọ na njedebe site na ikpo okwu NDC anyị ga-enye ndị ahịa azịza 'otu nkwụsị' maka njem na-enweghị ntụpọ na ndị mmekọ, ma ihe nketa ma ọ bụ ụgwọ dị ala, site n'ọnụ ụzọ ụwa Etihad."
Rachel Smith, onye dị mfeJet's Commercial Partnership kwuru, sị: “Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa mmekọrịta anyị na Etihad Airways, nke meghere Abu Dhabi ka ọ bụrụ ebe ndị njem anyị na ndị Europe ga-aga Etihad. Site na njikọ onwe onye mara nke ọma yana mmekọrịta mmekọrịta, anyị na-aga n'ihu na-agbatị nnweta nke ụwa niile site na network EasyJet na-enyekwu ọnụ ahịa yana ụzọ ndị ọzọ maka ọtụtụ ndị ahịa. ”
Ndị ahịa ga-enwe ike ịzụta tiketi na webụsaịtị EasyJet site na obodo 68 dị na netwọọdụ ụgbọ elu na Europe na Abu Dhabi, na-ejikọ ụgbọ elu Etihad Airways site na ọnụ ụzọ ámá 10 nke Europe na Amsterdam, Athens, Barcelona, ​​Paris Charles de Gaulle, Rome, Geneva, Madrid, Manchester, Milan Malpensa, na Zurich. Airgbọ elu abụọ ahụ na-eme atụmatụ ịgbasa mmekọrịta ahụ iji tinyekwuo ebe ọdịnihu.